… dia manolotra fifaninanana misokatra ho an’ny rehetra ny Telma, mpanohana ofisialy ny hetsika.
“Ny kianja basket amin’ny endriny rehetra” no lohahevitry ny fifaninanana, ka hitakiana sary miavaka sy manaitra ao anatin’izany toerana izany. Loka mitentina Ar 7 tapitrisa no hatolotra ireo mpifaninana telo voalohany, ka fakan-tsary marika Nikon D7000 no loka voalohany. “Galaxy Tab” no faharoa ary I-phone 3-GS kosa ho an’ny fahatelo. “Ankoatra ny kalitaon’ny sary dia hitsarana ny sary ao anatin’ny fifaninanana kosa ny hafatra entin’ny sary”, araka ny fanazavan’I Lova Hasirina Bordes, tompon’andraikitry ny Telma.
Nisokatra nanomboka ny 1 jolay teo ni fifaninanana ary ny 15 aogositra no farany fandraisana sary sy ny kapila mangirana mitahiry az eny amin’ny Telma. Aseho ao anatin’ny tranonkala www.telma. Mg/ afrobasket, ireo sary 20 voafantina, ka ao anatin’izany no hitsaran’ny besinimaro izay hevreina fa tsara sy mendrika.
Aranty eny amin’ny Lapan’ny Kolontsaina sy ny Fanatanjahantena Mahamasina ihany koa ireo sary ireo mandritra ny Afrobasket. Amin’ny lalao famaranana ny 28 aogositra kosa no hampahafantarana ny mpandresy sy hanolorana azy ny loka. “Mba hampangarahara ny fifaninanana dia indray mandeha ihany ny olona iray no afaka misafidy ny sary tiany, hoy ihany izy.
Aterina na alefa any amin’ny foben-toeran’ny Telma eny Alarobia, BP 763 ny sary hifaninanana, ka sary iray ho an’ny olona iray miaraka amin’ny fanamarinana hoe “Afrobasket Men 2011-Concours photo”.